Hibada iyo Hal Abuurka Calendar
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka qodobada aad ku maqlidoontaan waxaa ka mida waraysi aan leeyalanay Axmed Cali Jaamac oo lagu martiqaaday inuu ka qayb galo kulan ka dhacaya dalka Maraykanka oo lagaga hadlayo hal-abuurnimada iyo ganacsiga.
Hibada iyo Hal-abuurka (Dhalinyarada iyo Dhaqanka)
Ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno, heeso hawleedyada Soomaalida iyo sida dhalinyarada magaaladu ula socoto.
Silsiladda Dhalanteed (Q.3aad)
Ku soo dhowaada dhegaystayaal qayb kale oo ka mida barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka gaar ahaan silsiladdii taxanaha ahayd ee la magac baxday Dhalanteed, taas oo ka hadlaysa waayaha dhalinyarada.
Silsiladda Dhalanteed (Q.2aad)
Ku soo dhowaada silsiladda Dhalanteed, oo ka hadlaysa waayaha dhalinyarada, waxaa innala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.18aad)
Ku soo dhowaada Qaybta 18aad ee barnaamijka hibada iyo hal-abuurka, waxaa innala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.17aad)
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka, toddobaadkan waxaynu dhegaysanaynaa qaybtii 17aad, waxaa inala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Hibada iyo Hal-abuurka (Q.16aad)
Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Hibada iyo Hal-abuurka waxaa innala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q. 15aad)
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka waxaana innala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.14aad)
Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka waxaa inala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.13aad)
Haatanna ku soo dhowaada Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka gaar ahaan silsiladdii xiisaha lahayd ee Gobaad, toddobaadkan odayashii wacdaro ayaa lagu dhigay.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.12aad)
Haatanna ku soo dhowaada Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka, waxaana ku jira sheekooyin xiise badan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inala socodsiinaya.
Barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka (Q.11aad)
Haatanna ku soo dhowaada qaybta 11aad ee barnaamijka Hibada iyo Hal abuurka, toddobaadkanna waxaa ku jira silsiladdii Gobaad oo maraysa meel xiisa leh.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.10aad)
Ku soo dhowaada qayb kale oo ka mida barnaamijkii xiisaha lahaa ee Hibada iyo Hal-abuurka, waxaana toddobaadkan ku jira maansooyin kala duwan oo xiisa leh oo ka hadlaya silsiladdii Gobaad.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.9aad)
Ku soo dhowaada qayb kale oo ka mida barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka, waxaana toddobaadkan markii ugu horraysay ku soo laabtay Yaxye Yeebaash oo muddooyinkanba la baadi goobayey.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.8aad)
Ku soo Dhowaada Qayb kale oo Xiise badan oo ka mida Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka, waxaadna ku maqli doontaan silsiladdii taxanaha ahayd ee Gobaad oo toddobaadkan galka seefta la iskala baxay.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.7aad)
Ku soo dhowaada qayb kale oo ka mida sheekadii taxanaha ahayd ee Gobaad halkaas oo hal'abuurka da'da yar ay ku soo bandhigaan suugaan ka hadlaysa waayaha Jacaylka, Guurka, Dhoof iyo loollanka dhinaca dhaqanka.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.6aad)
Haatanna ku soo dhowaada qayb kale oo ka mida Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka, toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan qaybtii lixaad.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q.5aad)
Ku soo dhowaada Barnaamijkii Hibada iyo Hal-abuurka Dhalinyarada, Toddobaadyadii inna dhaafay waxaa la baafinayey Gabadha Gobaad, waxaa war ugu dambaysay iyada oo tahriibtay, haddaba toddobaadkan markii ugu horraysay ayay soo hadashay tolow maxay sheegtay?
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q-4aad)
Waa qeybtii 4aad ee barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka, waxayna ka hadlaysa Silsiladdii Taxanaha ahayd ee Gobaad.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q-2aad)
Waa qaybta Labaad ee barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka, waxayna ka hadlaysaa Silsilad Taxane ah ee waayaha nololeed ee Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magcaabo Gobaad.
Barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka (Q-3aad)
Waa qeybta 3aad ee barnaamijka Hibada iyo Hal-abuurka, toddobaadkanna waxaa ku maqli doontaan Sheeko Sugaaneeddii Taxanaha ahayd oo toddobaadkan meel xiisa leh maraysa iyo Qodobo kale.
Barnaamijka Hibada iyo Hal Abuurka
Waa barnaamijka Hibada iyo Hal Aburka, wuxuuna ku saabsan yahay Silsilad Taxane ah oo ka hadlaysa Gabadh Soomaaliyeed oo lagu magcaabo Gobaad.